တကယ်ရှိတယ်.တကယ်ဖြစ်သွားပါပြီ…ဖဘ.ကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် ) – Myanmar
တကယ်ရှိတယ်.တကယ်ဖြစ်သွားပါပြီ…ဖဘ.ကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် )
October 11, 2020 admin Story 0
တကယ်ရှိတယ်.တကယ်ဖြစ်သွားပါပြီ….Fbကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် )
သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီးသွားတဲ့အရာတခုက Fbမှာပါတဲ့ messengerလေးတခု ဆိုရင် မမှားပါဘူး..ဒီနေ့ခေတ် Online အသုံးပြုသူ တချို့ဟာ Fb ဆိုတဲ့ စိတ်ကွယ်ရာ အရပ်ကနေ အိမ်ထောင်ရှိတာ မရှိတာ နားမလည်ကြပဲ ဒု သ န သောဆိုတဲ့ အပြစ်ကို လူမသိ သူမသိ တချို့တွေ ကျူးလွန် နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျနော့် သူငယ်ချင်း အကြောင်း ဆက်ရအောင် သူ့နာမည် ကျော်မြင့် သူတို့ မိသားစုက ဝန်ထမ်းတွေပါ သမီးလေး တစ်ယောက် ရှိပါတယ် ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ သူ့မိန်းမ Fb သုံးရင်းနဲ့ ယောကျ်ားလေး တယောက်နဲ့ စပြီး ခင်ပါတယ် အစကတော့ ရိုးရိုးသားသားပါ ” မင်္ဂလာပါ နေကောင်းလား ” စသည်ဖြင့်ပေါ့
ကျနော့် သူငယ်ချင်းကလည်း သူတို့ ရိုးရိုးသားပဲ ဆိုတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်တယ် ဘာမှလည်း ထွေထွေထူးထူး ပြောမနေတော့ဘူး.. ။နောက်ပိုင်းကြတော့ တနေ့ထက် တနေ့ အဲဒီလူနဲ့ အမြဲတမ်း စကားတွေ ပြောနေကြတာ သူတွေ့ လာတယ် တခါတလေ Free call တွေ ခေါ်ရင် သူ့မိန်းမက နောက်ဖေးကို သွားပီး ပြောတာ များတယ် ။
အဲဒီ အချိန်ထိ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဘာမှ မပြောသေးဘူး နားလည်ပေး လိုက်တယ် ။ သူ့မိန်မးက ခလေးကို ကျောင်းကြိုရမယ့် ဝတ္တရားတွေလည်း ပျက်လာတယ် ဖုန်းနဲ့ မျက်နှာလည်း မခွာတော့ဘူး ဖြစ်လာတယ် ။
တခါတော့ သူ့မိန်းမ ထမင်းချက်နေတုန်း ဖုန်းကို ယူကြည့်မိလိုက်တော့ သူတို့ ပို့ထားတဲ့ စာတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျနော့် သူငယ်ချင်း သူ့မိန်းမကို သွားပီးဆူတယ် ပြောတယ် ။ သူ့မိန်းမက ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ ဘာဖြစ်လဲ တဲ့ လိုင်းမှာဆိုတော့ တကယ် မဟုတ်ဘူးတဲ့ အပျော် စနေကြတာတဲ့…. ။
ကျနော့် သူငယ်ချင်း နားလည်ပေးလိုက်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဘဝင်မကျဘူး အပျော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မိန်းမ တခြားသူနဲ့ အဲလို ပြောထားတာတော့ ဘယ်သူက ဘဝင်ကျ မှာတုန်း ဟုတ်ဘူးလား.. ။
နောက်ပိုင်းသူ့မိန်းမက Fb က ကောင်နဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့ အကြောင်းသူ သိလာတယ် ၊ သူ့မိန်းမကို သူရှင်းပြတယ် မိန်းမရယ်တဲ့ မိန်းမ မှားတာကို သူ ခွင့်လွှတ်တယ်တဲ့…. ။ နောက် ဆက်ပြီး မမှားပါနဲ့တော့ကွာ တဲ့ ကိုတို့မှာ သမီးလေးလဲ ရှိတယ်လို့ သူပြောတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြောလို့ မရပါဘူး သူ့မိန်းမ ရှေ့ဆက်တိုးတယ်လေ…. ။
တနေ့ကျသူ အလုပ်သွား နေတုန်း Fb က ကောင်နဲ့ ခိုးရာ လိုက်ပြေးသွားတယ် ကျနော့်သူငယ်ချင်း သူ့သမီးလေးကို ဖက်ပြီး အရမ်းငိုတယ်လေ သမီး သမီးအမေ မရှိတော့ဘူးတဲ့ ခလေးက ဘာမှ မသိဘူးပေါ့… ။
ဒါနဲ့ သူ့မိဘဆီကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြ ခလေးကို ထားခဲ့ လိုက်တယ် ၊ အဲ့ဒီအချိန်ကနေ စပြီးကျနော့် သူငယ်ချင်း အလုပ်လည်း မသွားတော့ဘူး အရက်တွေချည်း ဖိသောက်တော့တာပါပဲ ။
ကြာတော့ အလုပ်ကလည်း ထုတ်ခံ လိုက်ရတယ် သူ့မိန်းမ ကိစ္စနဲ့ပဲ နေ့စဉ် ရက်ဆက် အရက်တွေ သောက် ဒီလိုနေရင်း တစ်လလောက်ရှိတော့ အရက်ကြောင့်ပဲ သူ လူ့လောကကြီး ထဲကနေ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ရတယ် ။
Fbကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ သူတို့ကြောင့် ကြားထဲက အပြစ်မရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ပဲလှော်ကြား ဆားညပ် မြေစာပင် ဖြစ်ခဲ့ရပီလေ ။ ဒါ့ကြောင့် Fb သုံးတဲ့သူတချို့ကို ကျနော် ပြောလိုက်ပါရစေ ။ Fb ကို လွဲမှားစွာ အသုံးမပြုမိပါစေနဲ့ လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ ။ သူငယ်ချင်းးရေ …အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်…. ။
အမှန်မှာတော့ ဖေ့ဘုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာ သုံးတတ်ရင် အင်မတန်အကျိုးရှိပေမယ့် အသုံးမတတ်ရင်တော့ ဘဝပျက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ဗဟုသုဖြစ်မယ့် စီးပွားရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေးတို့အတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အင်မတန် အကျိုးများပါတယ်။
အဲလိုမဟုတ်ပဲ အလွဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အခုလိုအဖြစ်ဆိုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ဖေ့ဘုတ်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း….
ဝါတွင်းကာလ အိမ်မပြောင်းရ၊ အိမ်မရွေ့ရ၊ အိမ်မဆောက်ရ၊အိမ်ထောင် မပြုရဆိုတာ မှန််/မမှန်